Epididymitis And Epididymo-Orchitis (သုက်ပို့ပြွန်ရောင်ခြင်း နဲ့ သုက်ပို့ပြွန်နှင့်အတူဝှေးစေ့ရောင်ခြင်း) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Epididymitis And Epididymo-Orchitis (သုက်ပို့ပြွန်ရောင်ခြင်း နဲ့ သုက်ပို့ပြွန်နှင့်အတူဝှေးစေ့ရောင်ခြင်း)
Epididymitis And Epididymo-Orchitis (သုက်ပို့ပြွန်ရောင်ခြင်း နဲ့ သုက်ပို့ပြွန်နှင့်အတူဝှေးစေ့ရောင်ခြင်း) ကဘာလဲ။
သုက်ပို့ပြွန်ဆိုသည်မှာ ဝှေးစေ့များမှ ဆီးစွန့်ပြွန်ဆီသို့ သုက်ကောင်များကို သယ်ဆောင်ပေးသော ပြွန်ဖြစ်ပြီး ဝှေးစေ့ အနောက်တွင် ရှိသည်။ သုက်ပို့ပြွန်ရောင်ခြင်းသည် ရောဂါပိုး ကူးစက်ခြင်း သို့မဟုတ် အခြား အခြေအနေများကြောင့် သုတ် ပို့ပြွန် ရောင်သော အခြေအနေတစ်ခု ဖြစ်သည်။
သုက်ပို့ပြွန်ရောင်ခြင်းသည် ဘတ်တီးရီးယား ကူးစက်ခြင်း သို့မဟုတ် လိင်မှတစ်ဆင့် ရောဂါပိုးကူးစက်မှု ကြောင့် အများ ဆုံး ဖြစ်ပွားပါသည်။ ဝှေးစေ့ကိုပါ ကူးစက်ခံရပြီး ၎င်းကို သုက်ပို့ပြွန် နှင့်အတူ ဝှေးစေ့ရောင်ခြင်း ဟုခေါ်သည်။
Epididymitis And Epididymo-Orchitis (သုက်ပို့ပြွန်ရောင်ခြင်း နဲ့ သုက်ပို့ပြွန်နှင့်အတူဝှေးစေ့ရောင်ခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
သုက်ပို့ပြွန်ရောင်ခြင်းသည် အမျိုးသားများတွင် အလွန် အဖြစ်များပါသည်။ ၎င်းသည် အသက် ၁၉-၃၅ နှစ်တွင် အဖြစ် များပါသည်။ အန္တရာယ် ဖြစ်စေသော အချက်များကို လျော့ချ ခြင်းဖြင့် ရောဂါကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပါသည်။ ပိုမိုသော အချက် အလက်များအတွက် ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင် ပါ။
Epididymitis And Epididymo-Orchitis (သုက်ပို့ပြွန်ရောင်ခြင်း နဲ့ သုက်ပို့ပြွန်နှင့်အတူဝှေးစေ့ရောင်ခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
သုက်ပို့ပြွန်ရောင်ခြင်း၏ အဖြစ်များသော ရောဂါလက္ခဏာ များမှာ
 သုက်ပို့ပြွန်ရောင်ရမ်းခြင်း၊ နာကျင်ခြင်း
 မကြာခဏ ဆီးသွားရခြင်း၊ ဆီးသွားရာတွင် နာကျင် ခြင်း
 လိင်တံမှ အချွဲကျိများထွက်ခြင်း
 ဝှေးစေ့တွင် နာကျင်ခြင်း
 လိင်ဆက်ဆံရာတွင် နာကျင်ခြင်း
 သုက်ရည်တွင် သွေးပါခြင်း
ကပ်ပယ်အိတ်တွင် နာကျင်၊ရောင်ရမ်းခြင်း သို့မဟုတ် အထက်တွင် ဖော်ပြထားသော ရောဂါလက္ခဏာ တစ်ခုခုရှိ သည်ဟု သတိပြုမိပါက ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။ လူတိုင်း၏ ခန္ဓါကိုယ်တုံ့ပြန်မှု သည် မတူညီနိုင်ပါ။ ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင် ဆွေးနွေးခြင်း သည် သင်၏အခြေအနေ ကောင်းမွန် ရန်အတွက် အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါသည်။
Epididymitis And Epididymo-Orchitis (သုက်ပို့ပြွန်ရောင်ခြင်း နဲ့ သုက်ပို့ပြွန်နှင့်အတူဝှေးစေ့ရောင်ခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
သုက်ပို့ပြွန်ရောင်ခြင်း ကိုဖြစ်စေသော အကြောင်းရင်းများ သည် အသက်အရွယ် နှင့် နေထိုင်မှု ပုံစံ အပေါ် မူတည်ပါသည်။ ဖြစ်စေသော အကြောင်းရင်းများမှာ
• လိင်မှတစ်ဆင့် ရောဂါပိုးကူးစက်ခြင်း။ သုက်ပို့ပြွန် ရောင်ခြင်း၏ အဓိကဖြစ်စေသော အကြောင်းရင်းမှာ ဆီးပူညောင်းကျရောဂါနှင့် ကလက်မိုင်ဒီယား ဖြစ်ပါသည်။
• ရောဂါပိုးကူးစက်မှု။ လိင်မှမဟုတ်သော အခြားရောဂါ ပိုး ကူးစက်မှုများသည်လည်း သုက်ပို့ပြွန်ရောင်ခြင်း ကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဆီးလမ်းကြောင်းနှင့် အဖိုသုက်ရည် ဂလန်း ရောဂါပိုးကူးစက်မှုရှိပါက ဘတ်တီးရီးယား သည် သုက်ပို့ပြွန်အတွင်းသို့ ရောက်နိုင်သည်။
• Amiodarone (Pacerone) ဟူသော နှလုံးဆေးသည် သုက်ပို့ပြွန်ရောင်ခြင်းကို ဖြစ်စေသည်။
• လေးလံသောအရာများမခြင်း သို့မဟုတ် အားစိုက် ထုတ်ခြင်း တို့ကြောင့် ဆီးစီးဆင်းမှု နောက်ပြန်ဖြစ်ကာ သုက်ပို့ပြွန်အတွင်း ဆီးဝင်နိုင်သည်။ (ဓါတုပစ္စည်း ကြောင့် သုက်ပို့ပြွန်ရောင်ခြင်း)
• ပေါင်ခြံတွင် ဒဏ်ရာရခြင်းသည်လည်း ထိခိုက်မှုကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။
•တီဘီ ကူးစက်မှု။ သို့သော် ရှားပါးပါသည်။
ငါ့ဆီမှာ Epididymitis And Epididymo-Orchitis (သုက်ပို့ပြွန်ရောင်ခြင်း နဲ့ သုက်ပို့ပြွန်နှင့်အတူဝှေးစေ့ရောင်ခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
သုက်ပို့ပြွန်ရောင်ခြင်းဖြစ်နိုင်ချေကို မြင့်စေသော အချက် များစွာရှိပါသည်။ ၎င်းတို့မှာ
• လိင်တံထိပ်ဖုံး အရေပြားအား မဖြတ်ထားခြင်း
• ကွန်ဒုံးမသုံးဘဲ လိင်ဆက်ဆံပါက သို့မဟုတ် သင်၏ ကြင်ဖော်တွင် လိင်မှကူးစက်သောရောဂါ ရှိခြင်း
• သင့်တွင် တီဘီရောဂါ ရှိခြင်း
• ဆီးလမ်းကြောင်းနှင့်ဆိုင်သော ပြဿနာရှိခြင်း
• ဆီးလမ်းကြောင်းတွင် ခွဲစိတ်မှုရှိပါက သို့မဟုတ် ပေါင် ခြံတွင် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခြင်း
• Amiodarone ဆေးသောက်နေရခြင်း
• ဆီးကျိတ် ကြီးခြင်း
Epididymitis And Epididymo-Orchitis (သုက်ပို့ပြွန်ရောင်ခြင်း နဲ့ သုက်ပို့ပြွန်နှင့်အတူဝှေးစေ့ရောင်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ဆရာဝန်သည် ဝှေးစေ့ နှင့် ပေါင်ခြံနေရာကို စစ်ဆေးခြင်း လုပ်ပါမည်။ လိင်တံမှ အချွဲကျိများထွက်ခြင်းစသော ပုံမှန်မ ဟုတ်သော ပြောင်းလဲမှုများကိုလည်း စစ်ဆေးပါမည်။ အချွဲကျိ နမူနာကိုယူ၍ လိင်မှတစ်ဆင့် ရောဂါပိုးကူးစက်မှုအတွက် စစ်ဆေးနိုင်သည်။
သုက်ပို့ပြွန်ရောင်ခြင်းကို အောက်ပါစစ်ဆေးမှုများဖြင့် အဖြေရှာ အတည်ပြုနိုင်ပါသည်။
• ဆီးနှင့် သွေးစစ်ခြင်း။ နမူနာကို ရယူပြီး ပုံမှန်မဟုတ် သည်များကို ရှာဖွေစစ်ဆေးပါသည်။
• အာထရာဆောင်း ရိုက်ခြင်း။ ဤပုံရိပ်ဖော်သော စစ်ဆေးမှု သည် ဝှေးစေ့လိမ်နေသော အခြေအနေ နှင့် အခြား အခြေအနေများကို ဖော်ထုတ် ပြသနိုင်သည်။ ဤစစ်ဆေးမှုများသည် ဆရာဝန်အား သင့်ခန္ဓါကိုယ် အစိတ်အပိုင်းများကို ရှင်းလင်းစွာ မြင်အောင် ကူညီပေးပြီး တိကျသော ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းရင်းများကို ဖော်ထုတ်ပေးနိုင် သည်။
Epididymitis And Epididymo-Orchitis (သုက်ပို့ပြွန်ရောင်ခြင်း နဲ့ သုက်ပို့ပြွန်နှင့်အတူဝှေးစေ့ရောင်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
သုက်ပို့ပြွန်ရောင်ခြင်းကို ဆေးသောက်ခြင်းဖြင့်ကုသနိုင် သည်။ ဆေးသည် ဘက်တီးရီးယားအား သတ်ကာ ဖြစ်ပွား စေသော အရင်းခံအကြောင်းရင်းကို ထိန်းချုပ်ပေးနိုင်သည်။ အသုံးများသော ဆေးအချို့မှာ-
• အနာ သက်သာသည့်ဆေးများ
သုက်ပို့ပြွန်ကို ဖယ်ရှားရန် လိုအပ်ပါက သို့မဟုတ် အခြားအရင်းခံ ရောဂါများကို ဖယ်ရှားကုသဖို့ လိုအပ်ပါက ခွဲစိတ်ကုသမှုကို ပြုလုပ်နိုင်သည်။
လူနေမှုပုံစံ ပြောင်းလဲခြင်းနှင့် အိမ်သုံးကုထုံးများ အသုံးပြုခြင်း သည် သုက်ပို့ပြွန်ရောင်ခြင်း နှင့် သုက်ပို့ပြွန်နှင့်ဆက်စပ်သော ဝှေးစေ့ရောင်ခြင်း ကို ကုသရာတွင် ဘယ်လို အထောက် အကူပြုနိုင်မလဲ။
အောက်ပါ လူနေမှုပုံစံများ နှင့် အိမ်သုံး ကုထုံးများ သည် သုက်ပို့ပြွန်ရောင်ခြင်း နှင့် သုက်ပို့ပြွန်နှင့်အတူ ဝှေးစေ့ရောင်ခြင်း ကို ထိန်းချုပ်နိုင်ပါသည်။
• လုံလောက်စွာ အိပ်စက်အနားယူပါ။
• ရောဂါကူးစက်ပျံ့နှံ့မှုကို ကာကွယ်ရန် အခြားလူများ နှင့် လိင်ဆက်ဆံမှုကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။
• လေးလံသော ပစ္စည်းများ မခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။
• ပြင်းထန်စွာ သော အားကစားနည်းများ ကစားပါက အကာအကွယ်ပစ္စည်းများ ဝတ်ဆင်ပါ။
• သက်တောင့်သက်သာ ရှိရှိထိုင်၍ ကပ်ပယ်အိတ်ကို မြှင့်မြှင့် ထားပါ။ ရောင်ရမ်းခြင်း သက်သာ စေရန် ရေခဲအိတ်ကပ်ပါ။
Epididymitis. http://www.healthline.com/health/epididymitis#Symptoms2. Accessed
Accessed July 21, 2016.http://www.healthline.com/health/epididymitis#Symptoms2.